သွားလေရာ နေရာကို သယ်ပိုး…
မလိုသောစကား အပိုဆာဒါးတွေ ထည့်
လူတယောက်ထဲကနေ နှစ်ကိုယ်ခွဲ သုံးကိုယ်ခွဲ
အဲဒီလို ကိုယ်ခွဲရုပ်ရှင် ရိုက်နေတဲ့သူတွေ…
ခဏ ခဏ ပြောင်းတတ်တဲ့သူတွေ…
ဒါပေမယ့် တကယ့် တကယ်
လက်ထဲကို သေနတ်ရောက်လာတဲ့ အခါ
သေသေချာချာ ချိန်ရွယ်ပြီး ပစ်လိုက်မိတာက
ကိုယ့်ရဲ့ နားထင်တည့်တည့်ကိုသာ ဖြစ်နေတော့တယ်…
*** ဘာကြောင့်လဲလို့ မမေးပါနဲ့… အဖြေမရှိပါဘူး…
လက်ထဲမှာ သေနတ်ရှိတဲ့သူတွေလဲ မကြောက်ကြပါနဲ့.. လာမငှားပါဘူး…
ဝယ်လို့ရတဲ့ နေရာလေးသာ သိရင် လက်တို့လိုက်ကြပါ…
Posted by သက်ဝေ at 1:00 PM
P.Ti November 18, 2009 at 1:45 PM
အိမ်မှာတော့ သနပ်ရှိတယ် အမ .. ယူမလား.
လက်တစ်ကမ်းကို လာခဲ့ပါ လက်တို့ဖို့ မမှီလို့
Anonymous November 18, 2009 at 1:59 PM
Rita November 18, 2009 at 2:15 PM
လက်တို့ ပြီးတော့ ပြောရဦးမယ်။ (မလုပ်ပါနဲ့ အစ်မရယ်။ ကြောက်လို့ပါ)
ပြီးခဲ့တဲ့ Sunday ကတင် Taxi Driver ကား ကြည့်ထားမိတာ။
ခုထိ စိတ်ထဲ ရှိနေတုန်း။
(မလိုသောစကား အပိုဆာဒါးတွေ ထည့်
ခဏ ခဏ ပြောင်းတတ်တဲ့သူတွေ...)
Hmoo November 18, 2009 at 2:19 PM
B carefully :D
Love Peace &.....
Kay November 18, 2009 at 2:25 PM
တစ် ကနေ.. တသိန်းထိ ရေ နေ..
Hmoo November 18, 2009 at 2:32 PM
Every thing's cool...
go bed ...
Anonymous November 18, 2009 at 3:05 PM
" အပိုဆာဒါး " ဆိုတာ ဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ ခင်ဗျ...
hmwe November 18, 2009 at 3:36 PM
ဗုံးမှ အဆင်ပြေမယ် အမရေ
ဒီလိုလူတွေက များမှ များ
ဒီလိုလူအတွက်တော့ကိုယ့် အသက်နဲ့ လဲဖို့ မတန်ပါဘူး
Anonymous November 18, 2009 at 3:37 PM
ကြောက် ကြောက် လိုက်တာ...
လက်ညှိုးလေးကွေးဖို့ ဘယ်နှစ်နှစ်စောင့်နေရမယ် မသိသေးဘူးးးးး
ချစ်ကြည်အေး November 18, 2009 at 7:45 PM
ကြောက်ထှာ...အေ ၊ ခုပဲလက်နာပျောက်တဲ့ဟာ..ကို၊
တန်ခူး November 18, 2009 at 10:57 PM
သက်ဝေရေ… ပြင်းထန်လိုက်တဲ့ ကဗျာသေနတ်… ထိတဲ့သူတွေ ထိကုန်ပြီထင်တယ်…
သားဆော့တဲ့သေနတ်လေးရှိတယ်… ယူမလား… စတာပါ… စိတ်မဆိုးနဲ့ နော်… စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားအောင်လို့ ပါ…
Anonymous November 18, 2009 at 11:56 PM
khin oo may November 19, 2009 at 2:40 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 19, 2009 at 7:38 AM
Thant November 19, 2009 at 10:25 AM
mae November 19, 2009 at 3:40 PM
Nge Naing November 19, 2009 at 10:11 PM
ဘယ်သူနဲ့ ဘာတွေ မကျေမချမ်း ဖြစ်နေတာလဲ။ အဲဒီလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ အဖန်ငါးရာငါးဆယ် ပြန်ခံရတတ်တယ်။
ကြည် November 21, 2009 at 2:02 AM
ခုတလော ဖတ်ရတဲ့သက်ဝေရဲ့ စာတွေကို အရမ်းကြိုက်နေမိတယ်ကွယ်။( အော် အပိုဆာဒါးတွေလို့များ ပြောနေမလားဟင်)။
nu-san November 21, 2009 at 6:36 AM
မမ.. ရေးထားတဲ့ ကဗျာနဲ့ ပန်းချီက လိုက်တယ်.. အပြင်မှာတော့ တကယ်ကြီး လုပ်ရဘူးနော်... ;P
rose of sharon November 21, 2009 at 5:05 PM
ဟင့်အင်း...မလုပ်နဲ့... အားမပေးဘူး... ရောင်းတဲ့နေရာသိရင်တောင် မပြောပြဘူး :)
သီဟသစ် November 22, 2009 at 5:08 PM
စိတ်လျှော့ပြီး မာဖီးယား ဝင်ကစားလိုက်ပါ (သို့)
သေနတ်ပစ်တဲ့ game တစ်ခုခုဆော့လိုက်ပါ
သက်ဝေ November 23, 2009 at 3:25 PM
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်နဲ့မတွေ့တဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာ ချရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာကြောင်းတွေကို လာဖတ်ပြီး ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်များကြောင့် ကိုယ့်စိတ်တွေ တခဏချင်းပဲ ပြန်လည်ပေါ့ပါး ကြည်လင်လာခဲ့ပါတယ်...။
ဒီအတွက် မှတ်ချက်ပိုင်ရှင်များ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါမည်...။
puluque November 23, 2009 at 3:58 PM
သနပ်လား..သားမှာ ရှိတယ်.. ယူမလား သရက်သီး သနပ်..
နောက်ဆုံးစကား (သို့) မေမေ
ကော်ဖီခွက်ထဲက အနက်ရောင် ကြယ်ပွင့်တစုံ
သံလွင် အိပ်မက် အတွဲ (၃) အမှတ် (၄)
မိုက်ဖေါ် မိုက်ဖက် တယောက်တိုးခြင်း